Kala sooc iimaylka xirfadlaha ah iyo warqad
Posted by Tranquillus | Nov 18, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Boostada Xirfadlaha ah iyo Warqaadayaasha: waa maxay faraqa u dhexeeya?
Inta u dhaxaysa iimaylka xirfadlaha ah iyo warqad, waxaa jira laba dhibcood oo isku mid ah. Qorista waa in loo sameeyaa si xirfadaysan, waana in la ilaaliyo xeerarka higgaadda iyo naxwaha. Laakiin labadan qoraal maaha kuwo intaas oo dhan u dhigma. Way ku kala duwan yihiin qaab-dhismeedka iyo qaacidooyinka asluubta labadaba. Haddii aad tahay shaqaale xafiis oo doonaya inuu horumariyo tayada qoraalkaaga xirfadaysan, waxaad timid meeshii saxda ahayd.
Iimayl loogu talagalay qaybinta degdega ah iyo fududaan dheeraad ah
Theemail waxay isu taagtay sannado badan sidii qalab lagama maarmaan u ah shaqada shirkadaha. Waxay la qabsataa inta badan xaaladaha xirfadeed, ee ku saabsan isweydaarsiga macluumaadka ama dukumentiyada.
Intaa waxaa dheer, iimaylka waxaa lagu arki karaa warbaahin kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah kombiyuutarka, casriga ama tablet-ka.
Si kastaba ha ahaatee, xarafka xirfadlaha ah, xitaa haddii aan si joogto ah loo isticmaalin, waxaa loo arkaa inay tahay xuddunta heer sare ee isdhexgalka rasmiga ah.
Warqad iyo iimaylka xirfadle: Farqiga qaabka
Marka la barbar dhigo iimaylka ama iimaylka xirfadlaha ah, warqadda waxa lagu gartaa habayn iyo codayn. Sida xubno ka mid ah warqadda, waxaynu soo qaadan karnaa xuska ciwaanka ilbaxnimada, xasuusinta waxa xarafka dhiirigeliya, gunaanadka, qaacidada asluubta, iyo sidoo kale tixraacyada ciwaanka iyo soo diraha.
Dhinaca kale emaylka, gunaanadku waa mid aan jirin. Dhanka tibaaxaha asluubta leh, guud ahaan waa gaaban yihiin. Inta badan waxaynu la kulannaa tibaaxo edeb leh oo ah nooca "Daacadnimo" ama "Salaan" oo leh noocyo kala duwan, oo ka duwan kuwa laga helo xarfaha kuwaas oo dhaqan ahaan dheer.
READ Iimayl si degdeg ah u baxa waxa uu u noqon karaa iimaylka khatarta ah qoraagiisa
Waxaa intaa dheer, emaylka xirfadlaha ah, jumladuhu waa kooban yihiin. Qaab dhismeedku maaha mid la mid ah sida xaraf ama xaraf.
Qaab dhismeedka iimaylada xirfadlayaasha ah iyo waraaqaha
Inta badan xarfaha xirfadlayaasha ah waxaa loo qaabeeyey ilaa saddex cutub. Baaragaraafka koowaad waa xasuusin tagtadii, ka labaadna waxa uu raadraacaa xaaladda taagan, tan saddexaadna waxa ay saadaalisaa mustaqbalka. Saddexdan qodob ka dib raac qaacidada gunaanadka iyo qaacidada asluubta leh.
Sida iimaylada xirfadlayaasha ah, waxay sidoo kale u habaysan yihiin saddex qaybood.
Baaragaraafka koowaad wuxuu sheegayaa dhibaato ama baahi, halka cutubka labaadna uu ka hadlayo fal. Xagga cutubka saddexaad, waxa ay siinaysaa macluumaad dheeraad ah oo faa'iido leh qaataha.
Waa in la ogaadaa, si kastaba ha ahaatee, in habka qaybuhu kala duwanaan karaan. Waxay kuxirantahay ujeedka isgaarsiineed ee soo-diraha ama soo-diraha iimaylka.
Si kastaba ha ahaatee, hadday tahay iimaylka xirfadlaha ah ama warqad, waxaa lagu talinayaa inaadan isticmaalin smileys. Waxa kale oo lagu talinayaa in aan la soo gaabin qaacidooyinka asluubta sida "Daacadnimo" ee "Cdt" ama "Salaan" ee "Slt". Si kasta oo aad u dhowdahay, waxa aad mar walba ka faa'iidaysan doontaa in aad la noqoto wariyeyaashaada.
Kala sooc iimaylka xirfadlaha ah iyo warqad Nofeembar 18th, 2021Tranquillus
horeAasaaska Awooda Microsoft BI ee Bilowga ah
socdaMiyay fiicantahay in la diro iimaylo ama warqado?
Dib ula wareego ogeysiis la'aan, xuquuqda haweenka uurka leh
Warqad Muunad ah si looga tartamo mushahar bixinta
Fariin email u dir si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka kormeeraha